मकवानपुरमा किन बढी रहेका छन् संक्रमित ? - Khabar Break | Khabar Break
मकवानपुरमा किन बढी रहेका छन् संक्रमित ?
हेटौंडा । पछिल्लो केहि दिन यता मकवानपुरमा दैनिक एक सयको संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमित थपिँदै गएका छन् । थप हुनेमा दुई तिहाई बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।
मकवानपुरमा आज बिहान पनि १ सय १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहिबार जिल्लामा ४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो बुधबार बिहान,साँझ र राति गरेर एकैदिन १ सय ६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो संगै मकवानपुरमा हाल सम्म कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या २ हजार १ सय ८४ पुगकोमा हाल संक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय ८८ जना रहेका छन् । यि संक्रिय संख्या पछिल्लो एक हप्तामा थपिएका संक्रमित हुन् । संक्रिय संक्रमितमा होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहनेको संख्या ६ सय ५ जना र आइसोलेसनमा उपचाररत रहनेको संख्या ८३ जना रहेका छन् । मकवानपुरमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या १४ सय ६८ जना रहेका छन् । यहाँ हालसम्म कोरोनाको कारण १९ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १६ जना र मनहरी गाउँपालिका,बागमती गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका एकएक जना गरी १९ जना रहेका छन् ।
यस कारण मकवानपुरमा बढी रहेको छ संक्रमण
मकवानपुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको तथ्याङ्क हेर्दा गाउँमा भन्दा शहरमा धेरै जनामा कोरोना पुष्टि भएको देखिएको छ । मकवानपुरको १० स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका रहेका छन् । तेसमा पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रका रहेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नंबर १,२,४,५,११,८,९ र १० नंबर वडामा बढी संक्रमण पुष्टि भएको छ । यी वडा हेटौंडाको केन्द्र बजार क्षेत्रमा पर्दछन् ।
यिवडाहरु हेटौंडाको संगमचोक,सानोपोखराचोक,कान्तिराजपथ,ख्वापगल्ली,बुद्धचोक,सिमाचोक,बसपार्क,स्कुलरोड,शितलमहलचोक,हुप्रचौर लगाएत क्षेत्रमा पर्छन् । यहाँ दैनिक बिहानैबाट साना सवारी तथा मानिसहरुको भीडभाड हुने गर्दछ । तर यहाँ अधिकाशं बजार हिँडडुल गर्ने पैदलयात्रु तथा प्यापार व्यवसायी गर्नेहरुले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गरेको देखिदैँन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन मास्क लगाउन तथा सामाजिक दुरी कायम राख्न आग्रह गरे पनि पालना भने भएको छैन् । सार्वजनिक यातायातमा भिडभाड नै देखिन्छ । यस्ले कोहि व्यक्ति लाई संक्रमण भएको रहेछ भने संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ । हिन्दु नेपालीहरुको महान चाड दशै नजिकिय संगै बजार क्षेत्रमा पछिल्लो दिनहरुमा भिडभाड देखिएको छ । बजारमा दिनानुदिन संक्रमण तिब्र बढीरहँदा भिडभाडले संक्रमणको जोखिम पनि बढेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरिएको भिडभाडले संक्रमणको जोखिम बढीरहेको छ ।
स्वाब दिएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नु
कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा पनि संक्रमण बढीरहेको छ । नेपालमा पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमण देखिँदा कोरोना लक्षण देखिएकाहरुलाई आइसोलेसनमै केहि दिन राखेर परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएपछि मात्र घर पठाउने गरिएको थियो । तर हाल संक्रमण संख्या तिब्र बढीरहँदा संक्रमित आफै होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहनु परेको छ । लक्षण देखिएर,परिवारका सदस्यमा पुष्टि भएर वा संक्रमितकोमा सम्पर्कमा आएकोमा कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब परीक्षणको लागि दिएपछि व्यक्ति स्यम् सचेत हुनुपर्ने हो तर स्वाब दिएका अधिंकाशहरु सचेत नहुँदा संक्रमण फैलने संम्भावना धेरै रहेको छ । स्वाब दिएपछि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी घर परिवार तथा समुदायबाट परीक्षणको रिपोट नआउँदा सम्म छुट्टै बस्नुपर्दछ । यस्ले परिवार तथा समुदायमा संक्रमण फैलने सम्भावना कम हुन्छ ।
सम्बन्धीत निकाय मौन
पछिल्लो समयमा मकवानपुरमा कोरोना संक्रमण बढ्नुको साथै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । कोरोना संक्रमण न्युनिकरणको लागि जिम्मेवारी पाएको प्रशासन तथा स्थानीय तहनै मौन रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा मात्र बजार क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए÷नभएको अनुगमन गरेको थियो । तर पछिल्लो समय बजारमा के कस्ता गतिविधि भइरहेको र के गर्ने भनेर हालसम्म केहि ठोष निर्णय लिन सकेको छैन् । प्रशासन तथा स्थानीय तहले नियमित प्रभावकारी अनुगमन गरे बजार क्षेत्रमा पदैलयात्रु,उपभोक्ता तथा व्यापारीहरु सचेत हुने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्थे ।
मास्क लगाऔं,समाजिक दुरी कायम राखौ
हाल विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट दिनानुदिन हजारौ मानिसहरुको ज्यान गईरहेको छ । हालसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट १० लाख १० हजार बढी मानिसहरुको ज्यान गईसकेको छ । नेपालमा पनि हालसम्म कोरोनाको कारण ६ सय ९४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हालसम्म कोरोना उपचारको औषधी पत्ता लागेको छैन।
कोरोन संक्रमणबाट जोगिन हालसम्म मास्क लगाउन र सामाजिक दुरी महत्वपूर्ण रहेको छ । आँखा,नाक,मुख अनावश्यक रुपमा छुनु हुदैन् । समय समयमा साबुनपानीले हात धुने,मास्क लगाउने,नआवश्यक वस्तुहरु नछुने,खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा रुमालले मुख छोप्ने,जथाभावी नथुक्ने तथा ज्वरो,ज्वरो,स्वासप्रस्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरुले सकभर जनसम्पर्कमा नआउँने,आउँनै परेमा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्ने गरिएमा संक्रमण फैलने सम्भावना कम रहन्छ् । स्वास्थ्यमा समस्या आएमा समयमै सजग रहे संक्रमण बढ्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ ।
मकवानपुरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ सय ८८ जना